Mareykanka:kulan lagu taageerayay barnaamijka taakulaynta Ciidamada Xoogga Dalka oo lagu qabtay – idalenews.com
Mareykanka:kulan lagu taageerayay barnaamijka taakulaynta Ciidamada Xoogga Dalka oo lagu qabtay
Magaalada Minneapolis ee Dalka maraykanka ayaa xalay waxaa lagu qabtay kulan lagu taageerayay Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee Dagaalka kula kula jira maleeshiyaadka nabad iyo nalol diidka ah ee Al-shabaab.
Kulan-kaani oo ay sooo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Dalka maraykanka gaar ahaan Magaalada Miniyaabulis ayaa waxaana ka qeyb galay xubno ka socday Guddiga difaaca Baarlamanaka Federaalka Soomaaliya.
Maxamed C.raxmaan Wardheere oo ka mid ah Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Magaalada Minneapolisayaa sheegay in kulanku uu ahaa sidii loo garab istaagi lahaa Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo sidii Jaalayadu kaga qeyb qaadan lahaayeen Barnaamijka taakulaynta Ciidamada ee Dowladdu horay ugu dhawaaqday.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool caalamka ayaa kaalin weyn ka qaatay dibu dhiska Dalka iyo caawinta bulshada tabaalaysan.
Muqdisho:Qaar ka mid ah Muwadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibanaa Dalka Liibiya oo Maanta lagu soo celiyay